हाम्रो बारे - AlorAir
किन alorair चयन
सफाई र बहाली Dehumidifiers
Crawlspace र दलान Dehumidifiers
बहाली र सफाई
Crawlspace र दलान
समर्थन र सेवाहरु
नियमावली र तस्वीर
सेवा सोधिने प्रश्न
सफाई र बहाली
Crawlspace र छिंडीमा
वारेन्टी / वारेन्टी दर्ता
आँधी अभिजात वर्ग मर्मत भिडियो
वृहत HD55 मर्मत भिडियो
वृहत HD90 मर्मत भिडियो
वृहत HDi90 मर्मत भिडियो
आँधी LGR चरम मर्मत भिडियो
आँधी Por मर्मत भिडियो
आँधी अल्ट्रा मर्मत भिडियो
भिडियो कसरी प्रयोग गर्ने
वृहत HD90 भिडियो कसरी प्रयोग गर्ने
वृहत HDi90 भिडियो कसरी प्रयोग गर्ने
वृहत HD55 भिडियो कसरी प्रयोग गर्ने
कसरी प्रयोग गर्ने तूफान प्रो भिडियो
तूफान अल्ट्रा भिडियो कसरी प्रयोग
अन्य प्राविधिक अंक
AlorAir उल्लेखनीय ग्राहक समर्थन संग मूल्य, उद्योग प्रमुख सुविधाहरू र प्रदर्शन प्रदान को दर्शन मा स्थापित भएको थियो। हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? विश्व-वर्ग विनिर्माण क्षमता, व्यापक आर एन्ड डी सुविधा र साथीहरूले को समर्पित टोलीसँग पहिले र बिक्री गरेपछि समर्थन गर्न।
अमेरिका, हामी पूर्व र पश्चिम तट र व्यापारीहरु र वितरक को एक बढ्दै नेटवर्कमा वितरण हब छ। हामी पनि युरोप, अष्ट्रेलिया र एशिया मा शाखा छ।
छिंडीमा / crawlspace र बाढी / बहाली - हाम्रो उत्पादन लाइन हाल दुई बजार मा केन्द्रित छ।
दुवै तेर्सो र ठाडो अभिमुखीकरण - बाढी / बहाली बजार को लागि, हामी Dehumidifiers पूर्ण लाइन छ। वर्ग प्रमुख सुविधाहरू, विभिन्न क्षमता विकल्प, र मर्मतका सजिलो संयोजन संग, Dehumidifiers मनपर्ने हुन पक्का छन्। को Dehumidifiers बधाई गर्न, हामी सुकाउने र remediation प्रयासमा सहयोग गर्न blowers र HEPA scrubbers छ।
हाम्रो crawlspace र छिंडीमा एकाइहरु पनि यस्तो डिजिटल नियन्त्रण, सजिलो पहुँच, प्लग-N-प्ले घटक र पनि एक हाम्रो तेर्सो crawlspace एकाइ एकीकृत condensate पंप रूपमा वर्ग प्रमुख सुविधाहरू छ! यी सुविधाहरू, संकुचित हल्का डिजाइन, विभिन्न निस्पंदन विकल्प, टाढाको नियन्त्रण र ducting विकल्पहरू थप्न, यी एकाइहरु को स्थापनाकर्ताहरू र ग्राहकहरु आनन्द हुनेछ।
AlorAir उत्पादनहरु ऊर्जा तारा विकल्प, इस्वी संवत्, ETL saa एसजीएस र TUV सहित आफ्नो इरादा प्रयोग आधारमा विभिन्न प्रमाणपत्र छ। हाम्रो उत्पादन, डिजाइन विकास र हाम्रो ग्राहकहरु गर्न गुणस्तर को उच्चतम स्तर बीमा परीक्षण गरे। हाम्रो इन्जिनियरहरूले हाम्रो ग्राहकहरु खुसी पार्न नयाँ प्रदर्शन स्तर र सुविधाहरू लागि खाम धक्का जारी।
हाम्रो मिशन निरन्तर नया र परम मूल्य लागि सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरु प्रदान गर्न छ। AlorAir हाम्रो ग्राहकहरु यो मिशन एक वास्तविकता बनाउन सबै भन्दा राम्रो संसाधन, प्रविधि, उपकरण र पछि-बिक्री समर्थन उपयोग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
ठेगाना: 16300 Shoemaker Ave, सेरिटोस, CA90703